Owesifazane wangaphambili uTom Cruise ukhulelwe
Ukukhululwa kokugcina komlingani owayengumlingani uTom Cruise, owaziwa kakhulu u-Katie Holmes, wembule imfihlo yomdlali we-actress - ukhulelwe.
Le nkanyezi yabonakala emcimbini wokugubha umklamo we-Night Of Stars Gala, okwenzeka ngesonto eledlule eNew York.
Izivakashi ezivelele ezafika kusihlwa segala, zikhanya ngezingubo zabo. UCathy oneminyaka engu-36 ubudala naye ubukeka enhle ngendwangu eluhlaza okwesibhakabhaka. Yagijima ngokuzungeza isibalo sayo, igcizelela isisu esincane nxazonke.
Ukukhulelwa noma cha?
Izilaleli zazama ukungaboni ku-Holmes, kodwa kwavela umbuzo othakazelisayo.
Umbono wabahlanganyeli wahlukaniswa. Abaningi babecabanga ukuthi umculi othembekile ophelile ukudubula ngesikhathi esilandelayo sochungechunge oluthi "Ray Donovan", ekhululekile futhi athole amakhilogremu ambalwa engeziwe, aphethwe ngokukhohlisa endaweni yesisu. Kodwa iningi lalinokuqiniseka ukuthi umyeni wangaphambili wase-Cruz esikhundleni.
Ukuqagela isikhathi eside akudingekile. UCathy akazange ahlasele futhi aqiniseke ukuthi yini elindele umntwana.
Ubani uyise wengane?
Umdlali we-actress utshele ukuthi ubaba wengane ngumdlali wakhe omdala waseMelika nomculi uJamie Fox. Sekuyisikhathi eside bafihla ubudlelwane babo emaphephandabeni, bebiza ngokuthi bangabungane. UBolmes wacacisa ukuthi bebelokhu bekanye ndawonye iminyaka engaphezu kwengu-2.
Naphezu kwedumela lika-Lovelace, uJamie wakwazi ukukholisa lo mdlali, okwamanje owahlukana noTom Cruise, ukuthi ufuna ubuhlobo obunzima futhi obubaluleke kakhulu.
Njengoba abangane bakaCathy bathi, uFox unothando kakhulu naye, unakekela futhi unakekele.
I-Stylish asendulo: Ukuthandwa nguKatts Holmes e-Brooks Abafowethu kusihlwa
Esikhathini se-kimono nesikhwama: Katie Holmes waqala usuku
U-Katie Holmes uhlezi ngokumelene nokuxhumana kukaTom Cruise nendodakazi yakhe
Ingane izoba ingane yesithathu kuJamie, onabantwana ababili abavela kumama obelethayo. UK Katie naye unomntwana oneminyaka engu-9 ubudala, uSuri oneminyaka engu-9 ubudala, owake wabuza umama ukuthi amnike umzalwane noma udadewabo.
Lapho ezwa ukuthi isifiso sakhe siyogcwaliseka, intombazanyana yayithokozile. Ngaphezu kwalokho, ngokwemvelo, uSuri akahambisani nomshado kanina noJamie. Intombazane futhi ihlangana kahle.
UBrad Pitt waphupha izingane eziyishumi nambili
UDaniel Craig futhi ukhulelwe uRaily Weiss naseNew York: izithombe ezintsha zabashadile
UJohnny Depp uzama ukuthuthukisa isimo sakhe sezezimali ngokudubula ekukhangiseni kweJapane
Inkanyezi "I-Fast and the Furious" IDwala ibonise indodakazi esanda kuzalwa
U-Scarlett Johansson wahlukanisa umyeni wakhe wesibili ngokusemthethweni futhi wamangalela indodakazi yakhe
"Sawubona umhlaba": USerena Williams no-Alexis Ohanyan banikeze abalandeli nendodakazi esanda kuzalwa
Ngemuva kwesahlukaniso, uHalle Berry ususa ukucindezeleka ngeziphuzo ezinamandla
I-Royal Family yaseBrithani Great iyahamba uhambo olukhulu lonke elaseCanada
U-Oscar Isaac uzoba nguyise okokuqala
USofia Vergara noJoe Mangagnello
Umndeni usisekela uJayden Smith EMA Environmental Award
Ukuhaha kukaTom Cruise kwabhujiswa
UKim Kardashian washaya wonke umuntu ngombono oqhakazayo, egqoke njengendodakazi yaseJasmine
Ukuphila komuntu siqu kaKarl Lagerfeld
UChris Hemsworth nomkakhe
Ukukhulelwa ngokwemvelo emva kwe-IVF
Ibhayisikili yama-swimsuit mini
Mangaki amakholori asekhofi?
Ungazibulala kanjani ubuvila?
Ukuhlobisa izimoto zomshado
I-Swimsuit tankini 2016
Kudla izinsuku ezingu-6
Izingubo - imfashini spring-ehlobo 2014
Indlela yokunquma ubulili bebhayisikili?
Ukuzivocavoca kwe-rhythm kubantu abadala
Yini ongayifunila utamatisi, uma amaqabunga ephikisiwe?
U-Ashley Graham mayelana nobuhle be "usayizi plus"
U-Scandalist Madonna wathembisa abalandeli bakhe ngomlomo!
Kuphi ukuphumula ngoMeyi?